Tag: Email Kushambadzira | Martech Zone
Tag: Email Kushambadzira
Yedu email kushambadzira mutsigiri, Delivra, yatanga webhusaiti nyowani yakanaka nhasi, yakagadzirirwa uye kugadziridzwa nedzimwe shamwari dzedu dzakanaka, SpinWeb, paAccrisoft Freedom. Delivra anga ari mutsigiri weiyo Martech Zone kwemwedzi mitatu, uye isu takada kushanda pamwe neiyi klayiti-yakazvipira uye ine ruzivo timu yakabva kunze kweIndipolis. Delivra's email yekushambadzira chikuva inopa akasiyana maficha anoenderana nezvinodiwa nevatengesi, C-chikamu chevatariri, uye vanogadzira, kusanganisira Rondedzero manejimendi, WYSIWYG mupepeti, Chikamu,
Chitatu, December 5, 2007 China, June 11, 2009 Douglas Karr
Zvinoenderana neDuramazwi.com: Pakati, imwe yenzira kana nzira dzekutaurirana kwakawanda, ruzivo, kana varaidzo munharaunda, semapepanhau, redhiyo, kana terevhizheni. Zvichida iro rakaomesesa basa kune chero software sevhisi ndeyekukunda iwo maparadigms eiyo indasitiri yauri kushandira. Ndichataura zvakanangana neindastiri indasitiri mune uyu muenzaniso, asi zvakafanana nechero ipi ecommerce kambani… kunzwisisa zvinoitwa nevatengi vako online vs. muchitoro chako, pa